Search Results ဇာဂနာ | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 44
447 search results for "ဇာဂနာ"
> ခဵဉ်ပေၝင်ရက်ြသည်ရဲႚိုံင်ငံရေးဖတ်စာရေဒြေၝင်ူးဖဖြေဖော်ဝၝရီ ၁၈၊ ၂၀၀၈ နိဒၝန်း မိုးမခအယ်ဒီတာမင်းမဵားက စာရေးသူကို စာဖတ်သူမဵားကုသဘာပေးသည့် ပေးစာတေကြို ပေးလြာ၏။ မဵက်စောင်းကလည်း ခဲူပလိုက်သေးသည်။ ဇာဂနာူပက်လုံးတခုကိုသာ သတိရမိသည်။ “ရေးခဵင်တာရေး၊ ဒၝတော့ မရေးနဲႚ။ ဆိုခဵင်တာ ဆို ဒၝတော့ မဆိုနဲႚ၊ တီးခဵင်တာတီး ဒၝတော့ မတီးနဲႚ”လိုႚ ဒိုင်လူုကီးက မိန်ႚမြာသည်။ “ဆရာရေ … အဲဒီ “ဒၝတော့” ဆိုတာကို လင်းတော်မူပၝ” ဆိုတော့ ဒိုင်လူုကီးက “မေးခဵင်တာမေး၊ “ဒၝတော”့ မမေးနဲႚ ” လိုႚူပန်ေူဖတာကို ပြဲကဵခဲ့တာ သတိရသည်။ သိုႚသော်လည်း ရေးတော့ ရေးရအုံးမည်။ စာတည်းက “ဒၝတော့” မတင်ဘူးဆိုလဵင်တော့ အရပ်တကာလညြ့်ူပီး ခဵဉ်ပေၝင်ရကြ် လညြ့်ရောင်းနေရုံသာ။...
>မိုးမခ ရဲႚ ရေဒီယိုခဵစ်သူမဵား ဆစ်ဒနီ – ဖေဖော်ဝၝရီ ၁၀၊ ၂၀၀၈
> မိုးမခ ရဲႚ ရေဒီယိုခဵစ်သူမဵား ဆစ်ဒနီဖေဖော်ဝၝရီ ၁၀၊ ၂၀၀၈ ပဵားရည်ဆမ်း – ခဵစ်သူမဵားနေႚသီခဵင်း၊ မာမာအေးသတင်ိးံငြ့် သီခဵင်းပဒေသာမဵြိးခဵစ်စိတ်နဲႚ ရေးတဲ့စာ –ေုကးမုံဦးသောင်းပဒေၝင်တိုင်းရင်းသား ဒုက္ခသည် ဆောင်းပၝး – ဧရာဝတီုကာူးဖတ်သတင်း တပုဒ်ဂဵန်န၀ၝရီနောလိပ်နဲႚ ဗိလပ်ူပန်သန်း – ရေဒြေၝင်ူးဖအြကယ်ဒမီပြဲိံငြ့် ဇာဂနာ့အူမင်ူမန်မာစကားေူပာုကမယ် အစီအစဉ် ဦးပန်တဵာ၊ိံငြ်ူးမတ်ခိုင်၊ နန်းဖောဆေး စီစဉ်သည် No tags for this post. Related posts No related posts.
>ဗိုလ်ခဵပ်ြအောင်ဆန်း ရုပ်ရင်ြဇာတ်ညနြ်း – ၃
> ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ရုပ်ရှင်ဇာတ်ညွှန်း – ၃ဇာဂနာဖေဖော်ဝါရီ ၅၊ ၂၀၀၈ နေရာ။ ။ ပဲခူးဆောင်အချိန်။ ။ ည ရနာရီသရုပ်ဆောင်။ ။ အောင်ဆန်း၊ သိန်းဖေ၊ သီဟန်၊ ကျော်ငြိမ်း (ဖိုင်တွဲ ကို စားပွဲပေါ်ပစ်တင်လိုက်ပြီး) ကျော်ငြိမ်း။ ။ အဲဒီတော့ ဒါ ဘာ ဆက်လုပ်ရမှာလဲ။သိန်းဖေ။ ။ ပြီးပြီလေ၊ ရပ်လိုက်ရုံပဲပေါ့။ အောင်ဆန်း။ ။ မဟုတ်သေးပါဘူး၊ မင်းဟာ က ရှုပ်ချည် နှပ်ချည် နဲ့။သိန်းဖေ။ ။ ဒါ နိုင်ငံရေးပဲ။ ကိုယ် မှားတယ်ထင်တဲ့ဟာကို ဇွတ်ပေတေ လုပ်နေလို့ မရဘူး။ ပြင်သင့် ပြင်ရမှာပဲ။ ကျော်ငြိမ်း။ ။ ခု ကျောင်းသားတွေက မင်း လက်မှတ်လိုက်ထိုးခိုင်းလို့...
>သြေးစနြ်းလက်တေကြို ဘယ်သူတြေိံတ်ြဆက်လေမလဲ
> သြေးစနြ်းလက်တေကြို ဘယ်သူတြေိံတ်ြဆက်လေမလဲဂဵာနယ်လစ်ကိုကိုဇန်န၀ၝရီ ၂၉၊ ၂၀၀၈ ၂၀၀၆ ခိုံစ်ြအတကြ်ူမန်မာ့ရုပ်ရင်ြထူးခဋ္ဋန်ဆုတေကြို ဖေဖော်ဝၝရီလဆန်းပိုင်းမြာ နေူပည်တော်မြာ ပေးတော့ မယ်တဲ့ခင်ဗဵ။ စက်တင်ဘာ လူသတ်စစ်အစိုးရက ပေးအပ်ခဵီူးမငြ့်မယ့် အကယ်ဒမီဆုပေးပြဲဋ္ဌကီးပေၝ့ခင်ဗဵာ။ူပည်တငြ်း ထုတ် ဂဵာနယ်တစောင်မြာ ဖတ်ရတာကိုေူပာူပတာပၝ။ “ကန်ြဖမ်း”ူဖစ်မူဖစ်ကတော့ ဂဵာနယ်လစ်ကိုကိုလည်း အာမမခိံိုံင်ဘူးခင်ဗဵ။ နအဖလက်ထက်မြာက ဒီကနေႛ မနက်ူဖန် သေခဵာတာရယ်လိုႛ ဘာဆိုဘာမြ မရြိလေတော့ တပ်အပ်မေူပိာိုံင်တာကို အူပစ်လိုႛ မဆိုပၝနဲႛပေၝ့နော်။ ဟုတ်တယ် ဟုတ်။ အရင့်အရင်ိံစ်ြကာလတေတြုန်းကတော့ အကယ်ဒမီဆုပေးပြဲ နီးလာရင် ပရိသတ်တြေ လပ်ြလပ်ြရြားရြား မုန်ႛ ဖုတ်စား (အဲလေ … ယောင်လိုႛ) စိတ်ဝင်တစား ရြိတတ်ုကပေမယ့် ဒီကိံစ်ြမြာတောူ့ပည်သူတေခြမဵာ စိတ်ဝင်စား...
>စာဖတ်သူတြေ ပေးတဲ့စာမဵား – 24th Jan 2008
> စာဖတ်သူတြေ ပေးတဲ့စာမဵားဇန်န၀ၝရီ ၂၄၊ ၂၀၀၈ ပေးစာ ၁ မိုးမခ အမြားမဵား ဆိုပီး စာရေးလိုက်တာ မဟုတ်ပၝ။ အမန်ြကိုမင်စေခဵင်လိုႚပၝနော်။ ဒီလိုပၝ။ ကိုထနြ်ူးမင့်ိုံင်က ဦးလော်စစ်ဟန်ရဲႚသာူးဖစ်ပၝတယ်။ ခန်ြဆာရဲႚ သားမဟုတ်ပၝ ခင်ဗဵား။ူပီးတော့ ဦူးမင့်သိန်းက အဲန်အယ်လ်ဒီကေူပာခငြ့်ရလူုကီး တဦးပၝ။ ရြေႚနေ မဟုတ်ဘူး ထင်ပၝတယ်။ ဦူးမင့်သိန်းလည်း ကဵန်းမာရေး မကောင်းဘူးလိုႚုကားပၝတယ်။ နောက်ူပီး ရြေႚနေက ဦးအောင်သိန်ူးဖစ်ပၝတယ်။ ပေးစာ ၂ ကိုဇာဂနာ အမေ ဒေၞုကည်ဦိးံလြုံးရောဂၝနဲႚ ဆေးရုံတင်ထားပၝတယ်။ အခုထိတော့ သက်သာသလား မုကားသေး။ ဖခင် ဦးနန်းညနြ်ႚဆေကြလည်း နေသိပ်ကောင်းတာ မဟုတ်ပၝ။ ကိုဇာဂနာလည်း ဖုံးဆက်လိုႚ မရသေး။ သတင်းမေးပေးပၝမယ်။...
>ဗိုလ်ခဵပ်ြအောင်ဆနး ရုပ်ရငြ် ဇာတ်ညနြ်း – ၂
> ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ရုပ်ရှင်ဇာတ်ညွှန်း – ၂ဇာဂနာဇန်န၀ါရီ ၂၃၊ ၂၀၀၈ အချိန်။ ။ ၁၉၃၃ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ တနင်္လာနေ့ ညနေ ၃ နာရီ နေရာ။ ။ တက္ကသိုလ် သမဂ္ဂရှေ့နှင့် ပုဂံဆောင် သရုပ်ဆောင်။ ။ သိန်းဖေ၊ ကျော်ငြိမ်း၊ အောင်ဆန်း၊ သီဟန်၊ ကိုအုန်း၊ သခင်ဗစိန်နှင့် အခြားကျောင်းသားများ (ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမကို ပြရန်၊ ထိုမှတစ်ဆင့် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် အဓိပတိလမ်း အတိုင်း Trolley ဖြင့်ပြရန်၊ ကျောင်းသားကျောင်းသူများ ဖြတ်သွား ဖြတ်လာရှိစေရန် ) ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် သမဂ္ဂဘက်သို့ ကင်မရာ Pan (သမဂ္ဂ၀င်းအတွင်းမှ ထွက်လာသော ကျော်ငြိမ်း နှင့် သိန်းဖေ(လက်ထဲတွင် ဖိုင်တွဲတစ်တွဲ ကိုင်ထားစေ))...
> ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ရုပ်ရှင် ဇာတ်ညွှန်း – ၁ဇာဂနာဇန်န၀ါရီ ၁၄၊ ၂၀၀၈ အခန်းစဉ် အဖွင့်နေရာ အတွင်းဝန်ရုံး၊ စည်းဝေးခန်းမ၊ အာဇာနည်ကုန်း နှင့် ရွှေတိဂုံ ဘုရားလမ်းနေ့ အတွင်း၊အပြင် ရွှေတိဂုံဘုရား ထိုမှ ကင်မရာ ကရိန်းရှော့ (crane shot) ဖြင့် တဖြေးဖြေး နိမ့်လာ၊ (နောက်ခံအသံ မှာ ကလေးများစုပေါင်း သီဆိုနေသော သီချင်းသံဖြစ်ရမည်။သီချင်းမှာ ရာဇ၀င် အထုပ္ပတ္တိလဲ ရှိရမယ် မော်ကွန်းလဲထိုးလောက်တယ် မြင့်မြတ်တဲ့ ဗိုလ်အောင်ဆန်းရယ် … ဟူသော ဗမာ့သူရဲကောင်းသီချင်း၊ တူရိယာပစ္စည်းအသံ လုံးဝ မပါစေရ။ ကလေးများ သံပြိုင် သီဆိုနေမှုကိုသာ ပေါ်လွင်စေရမည်) အာဇာနည်ကုန်းမြင်ကွင်း တဖြေးဖြေးဝင်လာ၊ ကင်မရာကို ကျောပေးကာ စုဝေးသီဆိုနေကြသော ကလေးငယ်များ …ကင်မရာ(ဒေါ်လီရှော့တ်...
> မိုးမခ ရဲႚ ရေဒီယိုခဵစ်သူမဵား ဆစ်ဒနီဇန်န၀ၝရီ ၀၆၊ ၂၀၀၈ သတင်းတိုထြာ နဲႚ သီခဵင်းပဒေသာဘီဘီစီ ၂၀၀၈ ဗေဒင်ဟောစာတမ်း၊ ယခင်ဗိုလ်ရသြဘင်နဲႚ ယနေႚလူထုအူမင်ူဂိလ်ြတုစလောင်းနဲႚ ဇာဂနာအေူပာကောင်းပုံ၊ိံစြ် ၆၀ေူမာက် လတ်ြလပ်ရေးနေႚ စစ်တမ်း မလေးရြားရောက် သီးလေးသီး ဆေးရောင်စုံပက်လုံးမဵား တင်မိုး၊ုကည်အောင်၊ မင်းကိုိုံင်၊ ဌေ့းကယ်၊ ထင်ကေဵာ်နဲႚ ဇာဂနာ အသံတိုႚအပၝအ၀င် ဦးပန်တဵာ၊ိံငြ်ူးမတ်ခိုင် စီစဉ်သည် No tags for this post. Related posts No related posts.
>ူမန်မာူပည်တငြ်းရေးရာ သတင်းတိုထြာ – ဒီဇင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၀၇
>ူမန်မာူပည်တငြ်းရေးရာ သတင်းတိုထြာ မိုးမခ (ရန်ကုန်) ဒီဇင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၀၇ ရန်ကုန်ူမြိ့ မြာ စားသောက်ဆိုင် ဖငြ့်ခငြ့်ကန့် သတ်သြားမယ်ေူဖရငြ်းခဵက်မဵားနဲ့စင်ရော်မောင်မောင် ရိုက်ကူးခငြ့် ပိတ်ပင်ခံရူခင်း မရြိပၝဆိုတဲ့ ဖိုးဖြ ရန်ကုန်ူမြိႚထဲရြိ အမေရိကန် သံရုံးရြေႚက အတားအဆီးမဵာူးဖတ်ြသိမ်ူးပီ ပိတ်ဆိုႚထားသော တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းကို အထူးဖတ်ခငြ့်ရသူ ရြိ လာမည့် စနေနေႚတငြ် သီတဂူဆရာတော် ဦးဉာဏိသရ ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် ဓမ္ထာရုံ တငြ် တရားဟောမည် ရန်ကုန်ူမြိ့ မြာ စားသောက်ဆိုင် ဖငြ့်ခငြ့်ကန့် သတ်သြားမယ် ၂၀၀၈ ခိုံစြ်ဦးကစူပီး ရန်ကုန်ူမြိ့ တငြ်းမြာ စားသောက်ဆိုင်ဖငြ့်ခငြ့်ကို ကန့်သတ်ထိန်းခဵပ်ြသြားတော့မယ်လို့မြိ့ တော်ဝန်...
>သီးလေးသီးနဲႚ တန်ဆောင်တိုင်အူငိမ့်ပြဲ – ၂
> သီးလေးသီးနဲ့ တန်ဆောင်တိုင်အငြိမ့်ပွဲ – ၂ ဇာဂနာ ဒီဇင်ဘာ ၁၂၊ ၂၀၀၇ ကြယ်သီး ။ ။ ဒီနေ့ခေတ်ဆိုတာက သိပ် … တိုးတက်နေပြီ။ ဟော … အရင်က တမြို့ နဲ့တမြို့၊ တနိုင်ငံ နဲ့ တနိုင်ငံ စာရေးပြီး ဆက်သွယ်ကြရတယ်။ နောက်တော့ … တယ်လီဖုန်းနဲ့၊ ခုတော့ အီးမေးလ် နဲ့၊ ချက်တင်းနဲ့၊ ဂျီတော့်လ်က်နဲ့။ ကဲ … မတိုးတက်လား၊ ခုဆို ကျနော် နေ့တိုင်း၊ ညတိုင်း၊ ကွန်ပျူတာရှေ့ ထိုင် ထိုင် နေတာ။ စိန်သီး ။ ။ တကမ္ဘာလုံးနဲ့ ဆက်သွယ်နေတာပေါ့ …။ ကြယ်သီး ။ ။...
>Monks in Sittwe
>to collect Aung San's biograpy, speech and writing
>Kyi Maung Than - To Heavyweight Poet
>သီးလေးသီးနဲႚ ဆေးရောင်စုံ အူငိမ့်အဖြႚဲူပဇာတ်တိုမဵား ဇာတ်တိုက်